Kurwisa Kupesana neCoronary Kutapurirana Kunoenderera Mu Ankara RayHaber | raillynews
mushaTURKEYCentral Anatolia Region06 AnkaraKurwira Kupesana neiyo Coronary Utachiona kunoenderera muA Ankara
24 / 03 / 2020 06 Ankara, Central Anatolia Region, Railway, PHOTOS, GENERAL, HIGHWAY, KENTİÇİ Rail Systems, Tire Wheel Systems, musoro wenyaya, Metro, TURKEY
Kurwa kurwisa coronavirus denda mu Ankara kunoenderera pasina kudzikisira
Ankara Metropolitan Municipality inoenderera mberi kurwa kwayo nechirwere chekoronavirus. Meya weMetropolitan Mansur Yavaş akataura kuti vachabatsira vagari vane makore makumi matanhatu nemashanu apfuura, avo vakadana "HomeKal", mushure mekubva kwavo nguva.
Vachitaura nevagari vane makore makumi matanhatu nemashanu zvichidarika kuburikidza nemagariro avo enhau, Meya Yavaş akazivisa kuti ivo vakarenda vatyairi vemudhudhudhu kuti vashande mumisika 65 nematavi, uye kuti zvese zvinodiwa zvevagari zvinosanganisirwa muchiyero ichi zvinosangana. ASKİ ichaita yekugadziriswa kwemvura yevanonyorera vane makore makumi matanhatu neshanu, vane mita yemvura ine kadhi, kubvira Chipiri, Kurume 17. Zvikwata zveMetropolitan Municipality zvinoshanda mumunda 65/24 zvehutano hweveruzhinji, mishonga inouraya zuva nezuva munzvimbo dzaveruzhinji uye masangano neveruzhinji nemasangano, kunyanya mota dzinofambisa vanhu.
Ankara Metropolitan Municipality inoenderera mberi kurwisa kwayo chirwere chekoronavirus pasina kuderera.
Kuwedzera kuedza kwehutachiona hwehutano hweveruzhinji, Metropolitan Municipality iri kuitawo matanho matsva ezvinodiwa zvevagari. Ankara Metropolitan Meya Mansur Yavaş akazivisa mune chirevo chake mumagariro enhau enhau kuti zvemusika zvezuva nezuva zvinodiwa zvevagari vane makore makumi matanhatu nemaviri, avo vakadzoserwa nguva uye vakafonera "HomeKal", yaizosangana kuburikidza nevatyairi vemudhudhudhu vanobhadharwa neMetropolitan Municipality.
MOTORCYCLE Courters Yakabhadharwa
Meya Yavaş, uyo akagovana zvinyorwa zve misika 17 nematavi muA Ankara munzvimbo yekutanga, zvese pamabhaisikopo ake enhau uye paMetropolitan Municipality webhusaiti, akataura kune vagari vane makore makumi matanhatu nemashanu zvichidarika nemazwi anotevera.
“Shamwari dzangu dzinodikanwa nyika, kutanga, tasvika kwauri. Ndinovimba tichasvika kuburikidza nemazuva ano akaipa pamwe chete, neruoko. Sezvazvinozivikanwa, nguva yekudzingiswa yakaunzwa pazera ramakore makumi matanhatu nemashanu zvichidarika. Nhaurirano dzedu nemaketeni emusika dzinoramba dzichiita zvinodiwa nevaya vanoshaya. Munguva pfupi, isu tichavaburitsa ivo vese nenzvimbo yavo, ruzivo rwekero, bazi uye ruzivo rwemazita. Iwe unozogona kuwana zviri nyore zvaunoda. Isu tine zvakare kutaurirana nemakambani anotumira. Semapurovhinzi, tichaedza kukubatsira iwe nezve zvaunoda. Maitiro edunhu redu maererano nenzvimbo dzekushandira kumba achiri kuenderera mberi. Uye zvakare, yedu inopisa chikafu chevhisi inoenderera mberi kumakumi maviri emhuri dzinogara pasi pechikumbaridzo cheenzara. Ndinovimba muchapona mazuva ano akashata pasina kukuvara. Pamwechete isu tichaenda takabatana. Ndinokuremekedzai mose. ”
Metropolitan Municipality Social Services Dhipatimendi richabhadhara mari dzevanotumira dzakabatana neDare reParamende Zvese Magetsi. Kuita nenzira yemaseneti enharaunda, Metropolitan Municipality ichapa rubatsiro urwu pachena kune vagari vane makore makumi matanhatu nemashanu apfuura, uye zvakare zvakare kudzivirira vatengesi vasina basa vanounza mibairo yezuva nezuva kudzimba dzavo.
Çağdaş Yavuz, Sachigaro weFederal yeAnatolian Toyota Courters, akaungana pamberi paMetropolitan Municipality akataura kuti akagadzirira basa, akati:
“Pakutanga, ticha shumirwa nemazana zana. Tichaenderera mberi pamwe nevazhinji vatengesi zvichienderana nekuwedzera kwekushayikwa. Isu tine basa senge mubatanidzwa. Kusvikira nguva yekudzoka kwevagari vane makore makumi matanhatu nemashanu zvichikwira uye vane chirwere chisingaperi zvapera, isu tichavatora chikafu chavo uye zvekutanga zvinodiwa zvakatemwa kubva kumisika iri pakati pegumi nemazana nenomwe kubva muzana. Parizvino, vese maresitorendi nemaunitsi akavharwa, uye vatyairi vedu vemudhudhudhu vanga vasingashande. Meya Wedu weMetropolitan atorawo mamiriro ezvinhu aya uye nevanenge vatambi vedu vakave nemukana wekutora mari zuva nezuva kuenda kudzimba dzavo. "Tinopa kutenda kwedu nekutenda kuMutungamiri wedu."
Ankara City Council yakataurawo nezve kukosha kwekushandira pamwe pakati peAnnatolianthuthu Bhudhi Courder Federation, Local Markets Association uye Retailers Association, nekutenda nerubatsiro rweMetropolitan Municipality rwekufambisa mota mudhorobha muCity City, kwaraidaidzira kuti “HomeKal”.
KUSHANDISA KWEMUDZIMAI PASI MAHARA
Kutevera kurambidzwa kwekuunganidza mapepa muPuraimari mukati mechikamu chekurwisa kubuda kweiyo coronivirus, rutsigiro rwechikafu rwakatanga kupihwa mumatunhu mune vanhu ava vanogara zvakanyanya maererano nemirayiridzo yeMutungamiri Yavaş.
Mustafa Koç, Mukuru weDhipatimendi reMapurisa reMunharaunda, akataura kuti vakatakura disinication munzvimbo iyi vanounganidza mapepa, vanogara munzvimbo ye Şirindere ye Çiğdem District, varipo, vakapa ruzivo runotevera.
“Ino inzvimbo inogara vanhu vangangoita mapepa mazana matanhatu. Mapepa anounganidza mapepa anoumba boka guru revanhu njodzi uye zvinokanganisa njodzi kuutachiona uye kupararira. Nechikonzero ichi, isu takarambidza kutora mapepa. Isu takadyisa vanounganidza mapepa kunge maseru. Takagadzira hurongwa hwekusangana chikafu chavo nemhuri dzavo mangwanani nemanheru mazuva ese. Tichagovera chikafu nemhuri dzavo kune vanhu 600 vanogara mumatunhu mashanu akasiyana. Isu tinorasa hutachiona nzvimbo yavari mairi uye mapepa akaunganidzwa zuva rega rega. Sekureva kwevasayendisiti, iyo yakareba nzvimbo yekugara yehutachiona iri pamapepa. Kusvika tawana mhinduro yechigarire, tichadzivirira kubatwa uye kubvisa njodzi iyi. ”
Abdülkadir Aşık, akabatsirwa nerubatsiro rwekudya rwakagadzirirwa nekuparadzirwa muBELPA Cuisine, akati, "Hatichazotorerazve bepa nekuda kwehutachiona. Isu takabatwa zvisina kufanira semhuri, asi maneja akafunga nezvedu uye haana kutisiira nzara ne nyota. Ndatenda Metropolitan Municipality zvikuru. ”Mumwezve mutori wemapepa, Ceylan Avcı akati," Hatisi kuunganidza chakare nepepa zvekare. " Dunhu rinounza chikafu kwatiri uye rinogara richisaswa munzvimbo ino ”, vakatenda Metropolitan Municipality.
Seyfettin Aslan, Musoro weDhipatimendi reZvehutano, akataura kuti vatanga disin kasipiti mumatunhu gumi umo mhuka dzemumigwagwa dzinopihwa nevanozvipira vanoda mhuka dzinowanikwa muguta rose.
ZVINOGONESA KUTI Uwane Makore 65-KUSVIKIRA UYE DZIMBA DZINOGARA KUTI ASKI
The Metropolitan Municipality, iyo yakaunza matanho matsva anopesana nekutyisidzira kwedenda, ichatanga kurongedza mvura pamakadhi emakadhi evanogara vanyoreri vane makore makumi matanhatu nemashanu kupera kubvira Chipiri, Kurume 65.
Mukati meriyero yebasa, iro rinogona kushandiswa nevagari vane makore makumi matanhatu nemashanu vasingakwanisi kubuda nekufonera Başkent 65 kana (153) 0312 616 10, zvikwata zve ASKİ zvichaita chirongwa chekuburitsa mvura yevanonyoresa vachishandisa kadhi yemvura metres kumakero avo.
ASKİ, iyo inopa avo vanonyoresa zuva nezuva kuburikidza neyemavara mameseji (sms) uye zvekuzivisa, uye inoshanda pane-maawa makumi maviri nemasere, yasarudza kumbomisa nzira yekuvharirwa kwevanonyoresa kwekugara nekuda kwechirwere chechirwere kwemwedzi miviri. ASKİ General Directorate, iyo inoenderera nekuvhura mvura yevane zviuru makumi maviri nevaviri vanyori vekugara vakavhara mvura yavo nekuda kwezvikwereti zvavo zvisina kubhadharwa, yashandura nzira yekugadzwa kwemabasa epakati nepakati munaKurume 24. subscribers www.aski.gov.t ndiye Kuzivisa kuti iwe unogona kuita musangano ku ASKI; Iko kunyorera nyowani, kunyorera kunyorera, kunyorera kuvaka uye kunyorera nzira yekubvisa, kunyorera kunyoreswa, invoice kukwidza, counter change (counter kukundikana chikumbiro), invoice kubvunza uye kubhadharisa kwekuita kuchaitwawo online.
Mass TRANSPORT VEHICLES VANOPONESESWA ZUVA IZUVA
Dhipatimendi redziviriro uye Dhipatimendi reDziviriro uye Guta Aesthetics Dhipatimendi, iro rinoita basa rakawandisa rekuuraya hutachiona mumasangano neruzhinji mumaguta, rinosvibisa mota dzinotakura vanhu mazuva ese.
Ipo zvikwata zveDhorobha Aesthetics Dhipatimendi zvichichenesa nemidziyo yakasarudzika kunyanya mumigwagwa nemigwagwa mikuru, zvikuru mumapuranga emadhorobha uye zvimbomira, ANKARAY, Metro neEGO mabhasi, matekisi nemakirinari vanoiswa pasi pezuva nezuva kusagadzikana nemirairo yeMutungamiri Yavaş.
Achitaura kuti vanogutsikana nemabasa ekubvisa hutachiona ari kuitika kunzvimbo dzekutandarira, Fatih Özden, anoshanda nekutengesa zvinhu, akati, "Utachiona uhwu hwakonzera dambudziko rakakura kwatiri tese munyika. Meya wedu Mr. Mansur Yavaş anoita kuti mota dzedu dziurirwe mishonga zuva nezuva. Mota dzedu dziri muhutsanana. Ndatenda ini nekuda kwevashandi vedu vezvitoro. ”Ender Yılmaz akati," Chekutanga pane zvese, tinoda kutenda Mansur Yavas, Meya wedu weMetropolitan nekusaziva. Kuzvurudza kwemota medu kunoitwa zuva nezuva, ”akadaro. Murat Karakoca akataura kuti kuvimba neruzhinji kwawedzera kutenda nebasa iri reMetropolitan Municipality ndokuti, "Vanhu vedu vanogona kukwira mumotokari zvakachengeteka. "Tinotenda dunhu redu uye Meya wedu Mansur Yavas nebasa ravo."
Kuenderera mberi maitiro ehutachiona kumatekisi ari muKızılay Güvenpark Taxi Storage nzvimbo, BELPLAS A.Ş. Vatyairi vezvitoro vachitenda zvikwata zvekuchenesa vakaratidza kugutsikana nebasa iri seinotevera:
Dursun Göloğlu: "Semutyairi wetekisi, tinoda kutenda yedu Ankara Metropolitan Meya Mansur Yavaş. Mota dzedu dzinoda kupfapfaidzwa kuhutachiona zuva rega uye nekupfira mazuva ese. ”
Ensari Güzelyurt: “Ndinovimba tichapfuura mazuva ano. Tiri kufadzwa kwazvo nebasa iri. Tinoda kuti zviitwe mazuva ese isu pachedu pamwe nevatengi vedu. ”
Levent Altınok: “Kuti tishandire vanhu veA Ankara zvirinani, isu tinotevedzera nekutsigira sarudzo yakatorwa nharaunda yedu uye Ankara Metropolitan Municipality. Tiri kuyedza kuita nepatinogona napo semutyairi wetekisi kushandira vanhu veA Ankara pasi pemamiriro ezvinhu ari nani. Ndinoda kutenda veduwe Ankara Metropolitan Municipality nekupa ino basa. "
Iyo Metropolitan Municipality, iyo inotakura kuenderera isina hutachiona inoshanda kubva kumitambo masitepisi kuenda kune zvivakwa zvevasiri vehurumende masangano, machinda, mauto emapurisa, zvikamu zvemapurisa, zvivakwa zvevashandi vekanzuru, zvipatara uye mainini, anoitisa basa re disinawon ne ecological atomizer zvishandiso muAltındağ Önder Nharaunda uye nzvimbo dzakasarudzika umo vagari veSyria vanogara zvakanyanya.
MUSIAD logistics centre inoenderera mberi ichishanda pasina kunonoka
Kushandura maşukiyen mumatombo ematombo kunoramba kusingagumi
High Speed ​​Train Kubvakwa muBursa Inopfuurira
Basa renyika rekudzidzisa rinoenderera mberi risina kubviswa
100 mabhiriyoni emadhora mega mapurogiramu anoenderera mberi asina kubviswa
Kutengeswa kwekutengesa muIstanbul kunoramba kusingabatsiri
Iko inopisa inopisa inoshanda paharaunda inoenderera mberi isingapfuuri
Asphalt Inoshanda muKayseri
Altınordu Bus Terminal Construction Inoenderera Pasina Kukurumidza
Pachando, kurwisana nechando kunoramba kusingagumi (Photo Gallery)
Chino Kurwisana Chinopfuurira muBursa
Kufambisa kune Vashandi muVashandi veHutano muKocaeli mahara!